Capsule kuverenga yekuzadza muchina Vatengi uye fekitori - China Capsule kuverenga yekuzadza muchina Vagadziri
Yd-8 Hwendefa Bottle Kuzadza Machine
YD-8 Semi otomatiki Hwendefa Capsule Pill Kuverenga Machine Chigadzirwa mufananidzo: Kutya: YD-8 otomatiki Magetsi kuverenga muchina yakakosha yekuverenga mahwendefa, nyoro gelatin, yakaoma kapisi uye yekutsenga matadza, nezvimwe. Muchina uyu unotora maseti masere anopinza yekuverenga sensor yekuverenga ne 8 Inotungamira Nzira. Kubatsira kwemuchina hakuna chikonzero chekuchinja muforoma kana iwe ukachinja chinhu chekuverenga, uchingo gadzirisa kuverenga kwetafura nekukwirisa Nyore gadziridzo vhiri ...
Yd-8 Pharma otomatiki Capsule Hwendefa Piritsi Kuverenga & Kuzadza Mashini
Yd-2 Semi otomatiki Hwendefa Capsule Pill Kuverenga Mushini
YD-2 Semi otomatiki Hwendefa Capsule Pill Kuverenga Machine Chigadzirwa mufananidzo: Kutya: 1. Huwandu hwepellet hwakaverengerwa hunogona kumisikidzwa nenzira yepakati pakati pe0-9999.2. Stainless simbi zvinhu zvemuchina wese muviri zvinogona kusangana neGMP kududzirwa. 3. Nyore kushandisa uye hapana chakakosha kudzidziswa kunodiwa. 4. Precision pellet kuverenga neakasarudzika magetsi ziso rekudzivirira mudziyo. 5. Rotary kuverenga dhizaini nekukurumidza uye kumeso kushanda. 6. The muhombe pellet counti ...
Yd-4 otomatiki Magetsi Capsule / Hwendefa Kuverenga Mashini, Magetsi Kuverenga Mashini
YD-4 otomatiki Magetsi Capsule / Hwendefa Kuverenga Mashini, Magetsi Kuverenga Machine Chigadzirwa mufananidzo: Kutya: 1. Huwandu hwepellet hwakaverengerwa hunogona kumisikidzwa nenzira yepakati pakati pe0-9999.2. Stainless simbi zvinhu zvemuchina wese muviri zvinogona kusangana neGMP kududzirwa. 3. Nyore kushandisa uye hapana chakakosha kudzidziswa kunodiwa. 4. Precision pellet kuverenga neakasarudzika magetsi ziso rekudzivirira mudziyo. 5. Rotary kuverenga dhizaini nekukurumidza uye kwakatsetseka o ...